China ECommerce mmezu ọrụ na onye ọrụ | Sunson
Gịnị bụ ọrụ mmezu?
Ọrụ mmezu bụ ụlọ nkwakọba ihe nke atọ na-akwadebe ma bupu iwu gị maka gị. Ọ na-eme nke a site na mmezu ya. Ọrụ mmezu Ecommerce dị mma maka azụmaahịa na-achọghị ịmekọrịta ụgbọ mmiri ma ọ bụ karịa ikike ịchekwa ihe dị ugbu a ruo ebe ha na-enweghị ike izipu iwu onwe ha ọzọ.
1.Sunson API na - enyere gị aka ijikọ ebe nrụọrụ weebụ gị ma mekọrịta data.
2.Ibanye na sistemụ anyị iji nyere aka mee ka mmezu gị kawanye mma.
3.WMS (arelọ Ahịa arelọ Ahịa) ka emepụtara maka nlekota oge na arụmọrụ dị elu.
Mmezu eCommerce zuru ụwa ọnụ
E-commerce na-agafe ókè na-enyere ndị ahịa zuru ụwa ọnụ aka ịchọta ụlọ ahịa gị na ịzụta ngwongwo. Ọrụ gị kachasị mkpa bụ itinye ego na azụmaahịa iji gbasaa azụmahịa gị eCommerce. Ọrụ anyị bụ iji belata mmezu mmezu maka gị, mezuo ma bufee ngwongwo gị n'ọnụ ụzọ onye ahịa gị.
Ngwọta Mmezu niile na-esonye maka eCommerce
Ọrụ eCommerce niile ị chọrọ, dịka nchekwa, buru, mbukota na mbupu, enwere ike ime na Sunsonexpress. Mgbe afọ nke njikarịcha, anyị emeela ka usoro mmezu dị mfe. Yabụ, naanị ịkwesịrị ịrụ ọrụ dị mfe, sistemụ arụmọrụ anyị akpaghị aka ga-ejikwa ndị ọzọ.
Ecommerce Mmezu Ngwọta gụnyere:
Ebe nchekwa n'efu maka ụbọchị 90
Mbọn na ahaziri mbukota
Debe iwu maka mbupu akpaka
Nyochaa ezigbo oge na-akwụ ụgwọ ma jikwaa ụgwọ
Ama a ga - ezigara ndị na - azụ ahịa ozi ihe na - achọpụta ihe
Mfe Jikọọ Onlinelọ Ahịa Gị Dị Mkpa
Ijikọ ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na Sunsonexpress na-enye ohere ka iwu ka akpakọrịta na-akpaghị aka na sistemụ anyị ma anyị ga-emezu ma bupu ha n'ụlọ nkwakọba ihe China anyị nye ndị ahịa gị zuru ụwa ọnụ. A ga-emelite nọmba nsuso na ụlọ ahịa mgbe anyị gosipụtara akara dị ka emezuru.
Anyị nwere ike iwekota ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na ọtụtụ ụlọ ahịa eCommerce na enweghị oke ọnụ ọgụgụ ụlọ ahịa ị nwere ike ijikọ n'ime otu akaụntụ mmezu.
Emebere na China? Mgbe ahụ chekwaa na China na ụgbọ mmiri si China!
Ọrụ Sunsonexpress eCommerce Order mezue ya dị mma maka ndị ahịa n'ịntanetị ndị na-ebute ngwaahịa ha na China ma ọ bụ ndị na-ere ngwaahịa emere na China.
Warelọ nkwakọba ihe anyị dị na Shenzhen, China, nke dị nso ndị nrụpụta gị. Nke a pụtara na ego nchekwa na mmezu ya pere mpe ma oge nkesa dị mkpumkpu.
Ọbụghị naanị nke ahụ, anyị na-enyekwa ọrụ mgbakwunye bara uru iji depụta ma ọ bụ melite ogo ọrụ mmezu, dịka: nchịkọta ụlọ ọrụ mmepụta ihe, akara ahịa zuru ezu na ngwugwu ọdịnala.
Ọrụ Egwuregwu ECommerce dị ọtụtụ
Anyị lọjistik ngwọta kpuchie 200+ mba na mpaghara gburugburu ụwa site na ozi nzipu ozi, pụrụ iche ahịrị, na awara awara. Site na mmezu eCommerce na mbufe ahia, anyị na-agba mbọ ime ka mbupu zuru ụwa ọnụ dịrị gị mfe. A ga-eleba anya n'okwu gbasara njem na omenala gbasara mkpochapụ anyị. Ọrụ DDP na ọrụ DDU anyị ga-enwerịrị ọtụtụ ndị ahịa eCommerce.
Ecommerce mezue China
Ọrụ Mmezu Ecommerce
Arelọ nkwakọba ihe Ecommerce
Mmezu Iwu Ecommerce
Usoro Mmezu Ecommerce Order
Mmezu comlọ Ahịa Ecommerce